Nicholas Kay: Tusaale lagama qaadan karo Alshabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho: Mareeg.com: Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, Nicholas Kay ayaa ugu baaqay hoggaamiyaasha Soomaalida in ay ka faa’ideystaan hannaanka federaalka ee la doonayo in laga dhaqan geliyo Soomalia.
Mr Kay oo waraysi gaar ah siiyey BBC-da ayaa waxa uu tilmaamay in habka federaalka laga dhaqangeliyey waddamo badan oo horumaray, Soomaaliya na ay hormar ka gaari karto haddii si wanaagsan looga faa’ideysto.
Nicholas Kay oo wax laga weydiyey warbixin dhawaan ay soo saartay kooxda ICG oo ugu baaqaysay dowladda Soomaaliya inay tusaale ka qaadato sida Al-shabaab ay u xaliso khilaafyada ka jira deegaannada iyo degmooyinka ay ka taliso ayaa waxaa uu sheegay inaysan jirin wax laga faa’iideysan karo Al-shabaab haba yaraatee, wuxuuna sheegay in Al-shabaab ay iska dilaan dadka iyagoo aan maxkamad soo taagin.
Wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan dalka Soomaaliya, Nicholas Kay ayaa sidoo kale rajo-xumo ka muujiyay in sannadka 2016-ka sida qorshuhu ahaa ay dalka ka dhacdo doorasho xor ah oo dadku ay soo doortaan madaxadii meteli lahayd.
Hadaladiisan ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay jiraann xiisado siyaasadeed oo isasoo taryey oo ku saabsan hannaanka federaalka iyo maamul goboleedyada.
Qaramada Midoobay oo Kenya ka taageereysa dagaalka Alshabaab